Mijanona ao amin'i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2018-03 mpandimby ny Magazine > Mijanòna ao amin'i Kristy
Ilay mpanoratra lehibe atao hoe Mark Twain dia nanoratra tantara mahaliana. Nilaza izy fa indray andro rehefa nitondra ny zanak'andriana vao teraka avy tao amin'ny hopitaly ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy iray tany an-tany lavitra, dia nifandona tamin'ny sarety mpangataka mahantra ny kalesin'izy ireo. Tao anaty fiara nanetry tena dia nitondra ny vadiny sy ny zaza vao teraka avy ao amin'ny tranon'ny mpampivelona ho any an-tranony ilay lehilahy mahantra. Tao anatin'ny fisafotofotoana ny hetsika dia nifamono tsy nahy ireo olon-droa roa ireo ary dia niditra tao an-tranon'ilay mpangataka mba hitaiza azy sy ny vadiny ny andriana kely.
Rehefa lehibe ny zazakely rehefa lehibe, dia voatery nandeha hivoaka izy ary nitady sakafo. Raha tsy nahafantatra izany, dia izy mihitsy no làlana izay nitalahoany, satria an'ny mpanjaka tena rainy izy. Andro aman'alina dia nankany amin'ny lapa izy ary nizaha ny fefy vy teo amin'ilay zazalahy kely nilalao tao ary niteny tamin'ny tenany hoe: "Raha mba andriana ihany aho". Mazava ho azy fa andriana io! Niaina fahantrana ny zazalahy satria tsy fantany hoe iza izy, satria tsy fantany hoe iza ilay rainy.
Nefa mihatra amin'ny Kristiana maro koa izany! Mora tokoa ny mamakivaky fiainana tsy mahalala ny mombamomba anao manokana. Ny sasany amintsika dia tsy mbola tena naka ny fotoana hahitana hoe "iza na iza izy ireo". Hatramin'ny andro nahaterahantsika ara-panahy dia zanakalahy sy zanakavavin'ny Tompon'ny mpanjaka sy Tompon'ny Tompontsika isika! Mpandova mpanjaka isika. Mampalahelo fa rehefa mieritreritra ianao fa matetika miaina ao anatin'ny fahantrana ara-panahy mihazona tena ary mihazona ny haren'ny fahasoavana mahatalanjona. Io harena io dia eo isika, na mankafy izany isika na tsia. Betsaka ny mpino, amin'ny "sasany" tsy mpino "raha vao mandray ny tenin'Andriamanitra rehefa nanambara amintsika izay ao amin'i Jesosy isika.
Ny fotoana ninoantsika dia nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilaintsika mba hiainantsika fiainana kristiana. Nampanantena i Jesosy fa handefa "mpanampy" ny mpianany. "Fa raha tonga ny mpanolotsaina [mpanampy] izay hirahiko aminao avy amin'ny Ray, dia ny Fanahin'ny fahamarinana izay avy amin'ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy. Ary ianareo koa no vavolombeloko, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany » (Jaona 15,26-27).
Jesosy dia niresaka tamin'ny mpianany momba ny tsiambaratelon'ny fiainana ara-panahy niova fo: «Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay mitoetra ato amiko ary Izaho ao aminy dia mamoa be; satria raha tsy amiko dia tsy mahay manao na inona na inona » (Jaona 15,5). Mifandray akaiky ny fijanonantsika ao amin'i Kristy, ny fijanonany ao amintsika sy ny fahatongavan'ny Fanahy Masina. Tsy afaka mijanona ao amin'i Kristy isika raha tsy mandeha amin'ny Fanahy. Raha tsy mandeha dia tsy misy fijanonana. Ny fijanonana dia midika fa misy foana. Ny fiainantsika Kristiana dia nanomboka tamin'ny indray mandeha ary fanoloran-tena rehetra amin'ny fiainantsika an'i Kristy. Isika dia miaina isan'andro io andraikitra io.
Ny teny hoe "mpanampy" (Parakletos grika) dia midika hoe "atokana manampy". Manondro olona tonga hanampy ao amin'ny fitsarana. Na i Jesosy sy ny Fanahy Masina dia mampianatra ny fahamarinana, mijanona ho mpianatra ary mijoro ho vavolombelona. Tsy vitan'ny hoe toa an'i Jesosy ihany ilay mpanampy fa miasa toa an'i Jesosy ihany koa. Ny Fanahy Masina dia ny fanatrehan'i Jesosy tsy tapaka ao anaty mino.
Ny Paracletus dia fifamatorana mivantana amin'i Jesosy sy ny mpianany amin'ny taranaka rehetra nifandimby. Ny mpanentana, mpanentana na mpanampy dia mitoetra na miaina amin'ny mpino rehetra. Izy no mitarika antsika mankany amin'ny fahamarinan'izao tontolo izao. Hoy i Jesosy: «Fa rehefa tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia hitari-dalana anao ho amin'ny Fahamarinana rehetra Izy. Satria tsy hiteny momba ny tenany izy; fa izay ho reny dia hiteny, ary izay ho avy no hambarany aminao » (Jaona 16,13). Manondro antsika an'i Kristy foana Izy. «Hanome voninahitra ahy Izy; fa haka ny avy amiko izy ka hanambara izany aminao. Ny ahy rehetra dia ahy. Izany no antony nilazako hoe: Hesoriny amin'ny ahy izany ary hanambara aminao izany » (Jaona 16,14-15). Ny Fanahy Masina dia tsy manome voninahitra ny tenany akory fa tsy mitady ny voninahiny manokana. Tiany hanome voninahitra an’i Kristy sy Andriamanitra Ray fotsiny izy. Izay fihetsehana ara-pivavahana izay manome voninahitra ny Fanahy fa tsy i Kristy dia tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy momba ny Fanahy Masina.
Izay ampianarin'ny Fanahy Masina dia hifanaraka tsara amin'i Jesosy hatrany. Tsy hanohitra izy na hanakalo izay nampianarin'ny Mpamonjintsika. Ny Fanahy Masina dia mifototra foana amin'i Kristy. Jesosy sy ny Fanahy Masina dia miombon-kevitra tanteraka.
Ny fidirana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy noho ny ezaka ataontsika tsara indrindra, fa mitaky fiainana hafa tanteraka. Tsy maintsy teraka ara-panahy isika. Izy io dia fiandohana vaovao, fahaterahana vaovao. Afaka amin'ny fiainana taloha izy io. Asan'ny Fanahy Masina ao amintsika. Na amin'ny herintsika manokana na amin'ny alàlan'ny fahaizantsika samirery dia tsy afaka mampisy fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Miditra amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika rehefa manavao antsika ny Fanahin'Andriamanitra. Raha tsy misy izany dia tsy misy ny Kristianisma. Manampy amin'ny fiainana ara-panahy ny Fanahy Masina. Tsy manomboka amin'ny fanandramana olona mamoy fo ilay izy. Tsy misy ifandraisany amin'ny fahamendrehany manokana izany. Tsy mampijaly azy amin'izany isika. Tsy mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika. Tombontsoa lehibe ny afaka mitory ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. Isika manambara fotsiny izay efa nataon'Andriamanitra tao amin'i Kristy. Ny Fanahy Masina dia fanahin'ny fahamarinana, ary tonga Izy hampahafantatra an'i Jesosy ho làlana, fahamarinana ary fiainana. Tena voatahy isika! Andriamanitra momba antsika, miaraka amintsika ary miasa amin'ny alalantsika.